Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay (20kii Ogos 2016ka illaa 15kii Nofember 2016ka). Qaybta 1aad |
Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay (20kii Ogos 2016ka illaa 15kii Nofember 2016ka). Qaybta 1aad
Muddo saddex bilood ku dhow: Juun, Julaay iyo Ogos 2016ka ayaa aan maqlayay hanjabaad iiga imanaysay adeegayaal dadweyne oo ka hawl-gala Wasaaradda Duulista iyo Madaarka Hargeysa, kuwaas oo igu eedaynayay in aan qoray dhambaal gooddi ah oo loo diray diyaarado shisheeye ee ka hawl-gala garoonka Cigaal ee Hargeysa. Kolkii la demin waayay tabashada aan qiilka waddannin ee la ii soo tebinayo ayaa aan go’aansaday in aan afka furto, aniga oo 14kii Ogos 2016ka bilaabay taxane dhambaallo ah oo muujinaya hagardaamada ka jirta Wasaaradda Duulista iyo Madaarka Cigaal. Muddo lix maalmood ah oo qoraalku socday waxa aan helayay xogo kala geddisan oo xadhig ah, sidaas awgeed waxa aan galay feejignaan heerkeedu sarreeyo.
Dharaarahaa waxa aan ka samata-baxay saymo la ila maagganaa. Masuuliyiinta dhibsaday qoraalladaydu waxa ay xitaa dacweeyeen madaxda ciidanka Booliska Somaliland oo lagu canaantay in ay ka gaabiyeen tallaabadii ay moodayeen in ay ku habboon tahay arrinkayga.
Markii uu buuqu cirka isku shareeray waxa lala xidhiidhay shirkadaha is-gaadhsiinta, xilliyada gacanta la igu dhigi doonana waxa askarta lagu hagayay adeegga la-socodka dhaqdhaqaaqa qofka ee moobilka (GPRS). Mar kasta oo aan dareemo falal igu liddi ahna, waxa aan ka diga-rogan jiray goobta aan ku suganahay. Wakhtiyada qaarkoodna waxa aan demin jiray ama hawada ka saari jiray taleefanka.
20kii Ogos 2016ka ayaa aan amin fiidaddaw ah u tegay Maxamuud Yaasiin Askar (Malaw) oo ahaa nin aan oday/xeerbeegti u aqaannay isla markaana aanu xigaal nahay, isaga oo markaas joogay guriga Beceli (Tolka aanu magta iyo qaadhaanka wada-bixinno). Dareenku wuu iska jiraaye, joogitaankiisa gurigaas shaki ayaan ka qabay. Haddii aanu ahayn qoyskan xafiiska ku tashada, waxa aann dhawr qof weydiiyay 2014kii, muxuu ninkani guriga ka qabtaa? Ma jaajuus baa? Mar dambe waxa uu nin garanayay igu yidhi “Isaga iyo aabbihiiba basaasiin ayay ahaayeen. Waxa maxaad ka doontay?”.
Laba habeen oo aanan haleel haynnin midkood ayuu ila soo xidhiidhay, ujeeddada uu ii soo wacayna waxa uu iigu sheegay dhammaystirka qabyooyin ka dhex jiray qoyska aanu ka dhallannay. In kasta oo cirku da’ayay, waxa aan sii dhex qaaday dhibicidii roobka, aniga oo qaddarinayay qofka kulanka iga codsaday. Markii uu dharkaygu qoyay ayaan doonay in aan bas raaco, laakiin gaadhigii ayaa iga tegay. Inta aan cagaha wax ka dayay ayaan dirqi ku halabsaday gaadiidkii dadweynaha ee iga tegay.
Kolkii aan gaadhay baradii uu ku sugnaa, waxa uu ii sheegay in ay dad iga cabanayaan isla markaana la rabo in gudaha la i dhigo, warbixintiisa waxa uu ku xusay magacyada shakhsiyo faraha kula jiray shirqool la igu katiinadaynayo. Sidoo kale waxa uu ii soo bandhigay in aan dawladda xil ka qaato. Hadalkiisa waxa aan ka dhadhamiyay in uu mooggan yahay xaqiiqada waxa aan ka hadlay, mararka qaarkood waxa uu lahaa “Miyaad wax ka qortay safarka Madaxweyne Siilaanyo ee Gobolka Sool?”. Cabbaar kokii aan sheekada ka guray, waxa aan qof ahaan gartay in aanu micne buurani hadalkiisa ku jirin.
Waxa aan u xaqiijiyay in aanan wax gabbood-fal ah ku kicin, isla markaana aan dhawr maqaal oo run ah qoray iyo in aanan diyaar u ahayn qabashada mansab laga qaato xukuumadda. Ugu dambayntii waxa uu iga codsaday in aan la kulmo dadka wax iga tabanaya oo aan xadhig u soconnin, taasna waa aan aqbalay. “Haddii ay yihiin dad shacab ah oo wada-hadal u socda, waynu qancin doonnaa ama ka daw-bixi doonnaaye u yeedh” ayaan idhi. Intaas kaddib waxa uu garaacay taleefan “Halkaas ayaanu joognaa aniga iyo Siciide noo yimaadda” ayuu yidhi
Shaw wixii aan shakiga ka qabay ayaa run ah, ninkanina waxa uu ahaa basaas dacar ii walaaqaya. Halkii aanu dad rayid ah ka filaynnay ayaa waxa na hor istaagay gaadhi Surf ah oo tirsigiisu yahay 38701, waxaana ka soo daatay afar askari: laba dharcad ah iyo laba dirays xidhan oo hubaysan. Judhiiba labadii dharcadda ahaa ayaa aniga oo aan arkaynnin suunka igu dhegay oo i qabtay.
Sarkaal Yaanyo oo ahaa ninkii Wargeyska Hubaal toogtay 24kii March 2013ka oo qabashadayda horgale u ahaa ayaa igu yidhi “Kac Siciidow. Askarta raac”. “Hagaag Yaanyo. Waa aan idin raacayaa” ayaan ku warceliyay. Sidii ayaan ku koray gaadhigii. Wadihii baabuurka oo magaciisu ahaa Faarax ayaa muusannaabay “Ma waxa aad ii soo gadhaahsteen in aan dad soo xidho?”. “Dhib malaha” ayaa ay askarti yidhaahdeen. “Waar Siciid ma fiican tahay?” ayaa uu Faarax i yidhi, isaga oo ka xun in loo af-duubo taxaabistayda. “Waa nabad walaal” ayaa aan idhi. “Imakaba meel fog laguma geynayo. Inaadeerkaa ayaad u tegaysaa” ayuu Yaanyo yidhi. Markii aan soo baxayna waxa aan ogaaday ninka Faarax sheeganayay uu ahaa mid abti u ah Taliyaha Ciidanka Booliska oo qarinayay doorka uu ku leeyahay af-duubkayga. Ragga i wanddaafiyay ma ay sidannin wax sharci ah oo ay igu wanjaafaan.
Markii aanu galnay Saldhigga Xaafadda Qudhac-dheer waxa la iga qoray magacayga, magaca hooyaday iyo da’da aan jiro. Inta la iga saaray suunkii iyo kabihii isla markaana la iga qaaday moobillo iyo agab aan sitay ayaa “gal gudaha” la i yidhi. Waxa aan askartii weydiiyay sababta la igu xidhayo, “ma garanaynno ee baadhis ku qor” ayaa hadalkii la dhaafin waayay. Waxa la igu xareeyay qol mugdi ah oo caagado lagu kaajayo, kana mid ah kuwa ugu liita. Halkii baan ka helay taleefan aan xadhiggayga kula socodsiiyo qaar ka mid ah xigaalka iyo jaallayaasha.
Sida ay ilo xog-ogaal ahi xaqiijiyeen waxa xadhiggayga magaalada Burco ka soo amray Sarreeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan Taliyaha Ciidanka Booliska iyo Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Md Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ahaa wefdi Madaxweyne Siilaanyo u raacay Gobolka Sool. Si gaar ah waxa loogu xil saaray Gaashaanle Sare Maxamuud Ducaale Hoggaanka Hawl-gelinta Ciidanka Booliska Somaliland oo qudhiisu mar dambe iigu faanay in uu hormood u ahaa taxaabistayda.
Sidoo kale waxa gacan ku lahaa Maxamed Yuusuf Ismaaciil Maamulaha Madaarka Hargeysa, oo wakiil u ahaa Wasaaradda Duulista oo u midaysnayd in la gudaha la igu hubsado iyo Askari la yidhaahdo Mawliid Maxamed Jaamac (Mawliid Sangaab) oo sheegay in ay xil ciidannimo gudanayeen.
Markii aan muddo saacad ka yar ku xidhnaa Saldhigga Qudhac-dheer ayuu soo istaagay baabuur xaajiyad ah oo uu boolisku leeyahay “mee kii markii dhawayd la soo xidhay?” “waa ka qolkaas ku jira” “soo saara” ayaa la is-dhaafsaday. Kolkii qolka la iga furay ayaa la ii soo qaaday agabkii la iga reebay, waxaana la igu xidhay silsilad iyo laba quful. Hareeraha waxa iga maray askari hubaysan iyo baadhe magaciisu yahay Yuusuf ahaa oo masuul ka ahaa wareejintayda.
Sidii ayaanu ugu dhaqaaqnay dhinaca C. I. Dda Hargeysa. Habeenkaas waxa magaalada caasimadda maansheeyay roob aad u xooggan oo kala xidhay socodkii gawaadhida, maadaama oo ay cidhiidhi ahayd buundada kowaad ee Hargeysi waxa aanu ka wareegnay biriishka Biibsiga. Daadka ay rogayaan iliiladuhu waxa uu halis geliyay baabuurkii aanu saarnayn aniga iyo saddex askari oo kale, waxa nagu shan ahaa darawalka. “Miyuu daadku idin qaado ninba dhan ha u firxadee” ayaa aan naftayda kula faqay, jeclaayee in moodharku nala rogmado ama daadku na walwaalo. Illeen faryaro bidix ayaan ka bixi lahaa, qof kaastana badbaadinta lafihiisa ayuu ka fuur yeeli lahaaye.
Meelo uu wadaha baabuurku ka maagay maritaankoodana waa aan u sahlayay, anigoo leh “Gaadhigaasiba waa ka dhex maraye, ha joogsan. Waynu ka gudbi karnaa”. Dhanka sheekada guudna waa aan af-gobaadsanayay “Dalkaygii ayaa la igu xidhayaa. Amin ay noqotana waa aan ka soo baxayaa haddii Eebbe idmo. Xadhigga rag ayaa loo sameeyay”.
Intii aanu jidka ku jirnay waxa uu taleefanku sida dhibica roobka ugu soo dhacayay masuulkii u xil-saarnaa in C.I.D la igu hubsado. Wicitaankaas waxa aan ka dareemay in la igu haysto dhagar la buunbuuniyay. Wax aanu jidka haynnaba waxa aanu gaadhnay xarunta dembi-baadhista oo uu habeenkaas xafiiska joogay Laba Xiddigle Maxamed Nuur Kaariye (Maxamed-dheere) oo aanu xigaal nahay, kolkii aanu is toyannay, waxa uu sheegay in uu aabbahay iyo qoyskayga garanayo. Isla judhii uu magacayga qoray ayaa loo dhiibay taleefan uu ka hadlayay Cabdi Keyd doo ah Taliyaha Saldhigga Qudhac-dheer “Ninkaas waa la ii keenay” ayaa uu yidhi Maxamed-dheere.
Kolkii la ii dhaqaajiyay dhinaca xabsiga la igu ridayo ayaa uu Maxamed-dheere isaga oo suunka i haya yidhi “Maxaad samaysay? Halkii argaggixisada ayaa lagugu wadaa”. ”Maqaallo ayaan Wasaaradda Duulista iyo Garoonka Diyaaradaha Cigaal ka qoray” ayaan idhi. Waxa uu ku jawaabay isaga oo dhoolla-caddaynaya “Immaka ayaa la ila soo hadlayay oo la yidhi waxa aad tidhi waxa aanu soo ridaynnaa diyaarad caalami ah oo Madaarka Hargeysa ka hawl-gasha”. Waxa aan ku jawaabay “Taas waxa caddayn doona cidda eedda ii jeedinaysa”.
Qacdaa aan xaqiiqsaday sida loogu heellanaa xadhiggayga, hannaanka la ii wareejiyay iyo tibaaxaha wadne-gooyada ah ee la i huwinayo ayaa aan xabsiga laabta u sii daayay. Tawaawac iyo baryootan waxa aan kaga imi faras-magaalihii Hargeysa! Isla dharaartaa gudaha la i dhigayo waxa aan gutay waajib qaran, waxaanan faraha ka qaadnay qoraalka Manjhajka Dugsiyada Hoose/Dhexe ee Somaliland ee Afka Soomaaliga. Halkii aan ka filayay garaaddo la ii xidho, billad-maamuus iyo karaamo uu qaranku i huwiyo ayaa la igu abaal-mariyay meel-ka-dhac. Waxa la yidhi “Qaranka ayaa dhibbane kaa ah”. Kan aan u shaqaynayaa miyaanu qaranka ahayn?
La soco qaybta labaad insha Allah.